Akụkọ Noa na Iju Mmiri ahụ​—Ọ̀ Bụ Akụkọ Ifo Nkịtị?
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Bislama Brazilian Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chilean Sign Language Chin (Hakha) Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Gun Hausa Hebrew Hiligaynon Hmong (White) Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kabuverdianu Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kyangonde Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Norwegian Nzema Ossetian Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Portuguese (European) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Russian Sign Language Sango Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sunda Swahili Swati Swedish Tagalog Tajiki Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Turkish Twi Ukrainian Urhobo Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Vietnamese Welsh Xhosa Yoruba Zapotec (Quiatoni) Zulu
Iju Mmiri ahụ mere eme n’ụwa a. Chineke ji ya bibie ndị ajọ mmadụ juru ụwa mgbe ahụ, ma gwa Noa ka ọ rụọ ụgbọ o ji chebe ndị ezigbo mmadụ na ụmụ anụmanụ. (Jenesis 6:​11-20) Otu ihe mere anyị ga-eji kweta na Iju Mmiri ahụ mere eme bụ na e dere ya n’Akwụkwọ Nsọ, nke bụ́ akwụkwọ e “si n’ike mmụọ nsọ Chineke” dee.​—2 Timoti 3:16.
Ò mere eme ka ọ̀ bụ akụkọ ifo?
Gịnị mere e ji nwee Iju Mmiri ahụ?
Ndị mmadụ hà ama na a ga-enwe Iju Mmiri?
Olee otú ụgbọ Noa dị?
Afọ ole ka ò were Noa ịrụ ụgbọ ahụ?
Akụkọ ọdịbendị na akụkọ ifo ndị obodo dị iche iche na-akọ gbasara nnukwu iju mmiri
Baịbụl kwuru na Noa bụ onye dịrị ndụ n’ụwa a, kwuokwa na Iju Mmiri ahụ mere eme, ọ bụghị akụkọ ifo.
Ndị so dee Baịbụl kwetara na Noa bụ onye dịrị ndụ n’ụwa a. Dị ka ihe atụ, mmadụ abụọ so dee Baịbụl, bụ́ Ezra na Luk, bụ ndị na-akọ akụkọ ihe ndị mere n’oge ochie. Ha lezikwara anya nke ọma mgbe ha na-akpọ aha ndị nna nna mba Izrel. Ebe ọ bụ na ha denyere aha Noa, o gosiri na ọ bụ onye dịrị ndụ n’eziokwu. (1 Ihe E Mere 1:4; Luk 3:36) Matiu na Luk, ndị so dee gbasara ozi Jizọs, dekwara ihe ndị Jizọs kwuru banyere Noa na Iju Mmiri ahụ.​—Matiu 24:​37-39; Luk 17:​26, 27.
Ezikiel onye amụma na Pọl onyeozi kwukwara na Noa bụ onye anyị ga-esi n’aka ya mụta ime ezi omume na inwe okwukwe. (Ezikiel 14:​14, 20; Ndị Hibru 11:7) Ò nwere uru ọ bara ma ọ bụrụ na ọ bụ onye na-enweghị mgbe ọ dịrị ndụ ka ha chọrọ ka anyị mụta ihe n’aka ya? O doro anya na Noa na ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị ndị ọzọ rubeere Chineke isi bụ ndị anyị nwere ike ịmụta ihe n’aka ha n’ihi na ha bụ ndị biri ndụ n’ụwa a.​—Ndị Hibru 12:1; Jems 5:17.
Baịbụl kwuru ihe ụfọdụ kpọmkwem banyere Iju Mmiri ahụ. Mgbe Baịbụl kọrọ maka Iju Mmiri ahụ, o bidoghị ya otú e si ebido akụkọ ifo dị ka ịsị “O ruru otu ụbọchị,” ka a ga-asị na ọ bụ akụkọ ifo. Kama nke ahụ, Baịbụl kwuru afọ, ọnwa na ụbọchị ihe niile mere n’oge Iju Mmiri ahụ mere. (Jenesis 7:11; 8:​4, 13, 14) O kwukwara otú ụgbọ Noa ahụ hà. (Jenesis 6:15) Ihe ndị a Baịbụl kwuru gbasara ụgbọ ahụ mere ka anyị mata na akụkọ Iju Mmiri ahụ mere eme, ọ bụghị akụkọ ifo.
Baịbụl kwuru na tupu Iju Mmiri ahụ, “ihe ọjọọ nke mmadụ dị ukwuu.” (Jenesis 6:5) O kwukwara na ‘ụwa bụ ihe e bibiri ebibi n’anya ezi Chineke’ n’ihi na ime ihe ike na ịkwa iko jupụtara n’ụwa.​—Jenesis 6:11; Jud 6, 7.
Baịbụl kwuru na isi sekpụ ntị butere nsogbu n’ụwa mgbe ahụ bụ ndị mmụọ ozi nupụụrụ Chineke isi, ndị hapụrụ eluigwe bịa n’ụwa kpọrọ ụmụ nwaanyị ha na ha enwee mmekọahụ. Ndị mmụọ ozi a mụtara ụmụ a kpọrọ ndị Nefilim, ndị rụsara ndị bi n’ụwa n’oge ahụ arụrụala dị egwu. (Jenesis 6:​1, 2, 4) Chineke kpebiziri na ya ga-ekpochapụ ndị ọjọọ niile ahụ n’ụwa ka ndị ezi mmadụ fọrọ n’ụwa nwee ike ibido ndụ n’isi.​—Jenesis 6:​6, 7, 17.
Ndị mmadụ hà ama na-aga enwe Iju Mmiri?
Ee. Chineke gwara Noa ihe ga-emenụ ma gwa ya ka ọ rụọ ụgbọ a ga-eji zọpụta ma ndị ezinụlọ ya ma ụmụ anụmanụ. (Jenesis 6:​13, 14; 7:​1-4) Noa mekwara ka ndị mmadụ mara ihe na-aga ime, ma ha egeghị ya ntị. (2 Pita 2:5) Baịbụl kwuru, sị: “Ha amaghịkwa ruo mgbe iju mmiri ahụ bịara wee kpochapụ ha niile.”​—Matiu 24:​37-39.
Ụgbọ ahụ yiri akpati ma ọ bụ igbe toro ogologo, nke dị ihe dị ka otu narị mita na iri atọ na atọ n’ogologo, mita iri abụọ na abụọ n’obosara, ebe ịdị elu ya bụ mita iri na atọ. * E ji osisi gofa rụọ ya, jirikwa korota techie ya ime na azụ. Ọ dị okpukpu atọ, e kebisikwere ime ya ekebi. Ọnụ ụzọ ụgbọ ahụ dị n’akụkụ ya, ọ dịkwa ka windo ya dị n’ebe elu ya. O yiri ka a rụlitere ihe e ji kụchie elu ụgbọ ahụ elu ka mmiri wụsara na ya nwee ike ịna-agbapụ agbapụ.​—Jenesis 6:​14-16.
Baịbụl ekwughị afọ ole o were Noa ịrụ ụgbọ ahụ, ma o yiri ka ò ji ihe dị ka iri afọ anọ ma ọ bụ iri afọ ise rụọ ya. Noa akarịala narị afọ ise mgbe a mụrụ nwa ya nke mbụ, ọ dịkwa narị afọ isii mgbe Iju Mmiri ahụ bidoro. *​—Jenesis 5:32; 7:6.
Ọ bụ mgbe ụmụ Noa atọ torola ogo mmadụ ma lụọ nwaanyị ka Chineke gwara Noa ka ọ rụọ ụgbọ. Nke a pụtakwara na ihe dị ka iri afọ ise ma ọ bụ isii agaala mgbe ahụ. (Jenesis 6:​14, 18) N’ihi ya, ọ dịghị njọ ikwu na o nwere ike ịbụ na ịrụcha ụgbọ ahụ were iri afọ anọ ma ọ bụ iri afọ ise.
E nwere ọtụtụ akụkọ a na-akọ banyere nnukwu iju mmiri n’ọtụtụ ebe n’ụwa. Akụkọ ndị ahụ na-adị iche na nke ahụ a kọrọ na Baịbụl, ma ha na-enwe ebe ndị ha na nke ahụ a kọrọ na Baịbụl yiri. Ka ụmụ ụmụ Noa na-agbasa n’ụwa, o yiri ka ha nọ na-akọrọ ụmụ ha akụkọ Iju Mmiri ahụ. Ma, ka oge na-aga, a bịaziri tinyewe akụkọ ahụ nnu na ose, na-akọzi ya n’ụdị dị iche iche. Lee ụfọdụ n’ime ha.
Akụkọ mgbe ochie ndị Grik: E nwere otu nnukwu mmiri ozuzo nke gburu ndị niile bi n’ụwa ma naanị otu nwoke na otu nwaanyị bụ ndị fọrọnụ. A gwaziri ha ka ha mee ka ndị mmadụ jupụtakwa n’ụwa. Otú ha ga-esi eme ya bụ ịnatụfe okwute n’azụ ha. Okwute ndị a ga-aghọzi ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị.
Akụkọ mgbe ochie ndị Hindu: E nwere otu nwoke otu azụ̀ gwara na nnukwu mmiri ozuzo ga-ebibi ndị niile bi n’ụwa. Azụ̀ ahụ gwara nwoke ahụ ka ọ rụọ ụgbọ. Nwoke ahụ rụrụ ụgbọ ahụ, azụ̀ ahụ duuru ụgbọ ahụ gaa ebe na-enweghị ihe mere nwoke ahụ.
Akụkọ mgbe ochie ndị Babịlọn: E nwere otu nnukwu mmiri ozuzo ma naanị otu nwoke na otu nwaanyị fọziri. E mekwara ka ha ghara ịnwụ anwụ ma ghọzie chi.
Akụkọ mgbe ochie nke Ebe Ndịda Amerịka: E nwere otu nnukwu mmiri ozuzo, naanị otu nwoke, nwunye ya, na ụmụ ya fọrọ ndụ, ebe ndị ọzọ niile bi n’ụwa ghọrọ azụ̀.
^ par. 9 Na Baịbụl e ji kubit kọwaa otú akụkụ dị iche iche n’ụgbọ ahụ hà. Otu akwụkwọ ji ihe osise akọwa okwu ndị dị na Baịbụl kwuru na “ihe ọ̀tụ̀tụ̀ kubit ndị Hibru bụ 44.45 sentimita (ma ọ bụ 17.5 inch).”​—The Illustrated Bible Dictionary, Revised Edition, Part 3, peeji nke 1635.
^ par. 10 Ị chọọ ịma afọ ole ndị dị ka Noa dịruru ndụ, gụọ isiokwu bụ́ “Ndị Dịrị Ndụ n’Oge Baịbụl Hà Dịrị Ogologo Ndụ Otú E Kwuru na Ha Dịrị?” nke gbara n’Ụlọ Nche December 1, 2010.
Baịbụl Ajụjụ Ndị Baịbụl Zara Ihe Ndị Mere Eme Gosiri na Ihe Baịbụl Kwuru Bụ Eziokwu Akụkọ Mere Eme na Baịbụl
Noa “So Ezi Chineke Jee Ije”
Gịnị ka anyị ga-amụta n’aka Noa na nwunye ya na ezinụlọ ha?
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Akụkọ Noa na Iju Mmiri ahụ​—Ọ̀ Bụ Akụkọ Ifo Nkịtị?
ijwbq isiokwu 156